SANN MAW: June 2013
How to select the mobile phone network operators for Myanmar? Part -3,4and5---- by Sann Maw
တတိယပိုင်း ကို မစခင် ဒုတိယပိုင်းက အမှားပြင်စရာရှိတာ အရင်ပြောပါမယ့်..အပိုင်း ၂ မှာ အေပရယ် ၁၁ မှာ pre-qualified list 22 ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ် လုို့ရေးထားပါတယ်..အမှန်တော့ pre-qualified application အတွက် အရည်အချင်း ပြည့်မှီတယ်လုို့ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ယူဆတဲ့.. company ပေါင်း ၂၂ခု က application form တင်သွင်း ခဲ့ရာမှာ အပိုင်း ၂ မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ အချက် တွေနဲ့ တုိုက်စစ် ပီးတော့..pre-qualified အတွက် အရည် အချင်း ပြည့်မှီတဲ့ company ပေါင်း ၁၂ ခု ကို အေပရယ် ၁၁ ရက်ေ န့ မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။..အဲ့ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကို ဆက်သွယ်ရေး ဝက်ဘ်ဆုိုက် က (http://www.mcit.gov.mm/sites/default/files/pre-qualification_qa_2new.pdf ) လင့် မှာ တင်ထားတယ် ဆုိုပေမယ့်တကယ့် တကယ် သွားရှာတော့ page not found ပဲ ပြနေပါတယ်။..ဖတ်လုို့ မရတော့ပါဘူး..ဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့ ..ဒီလိုသိချင်သူများ တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ပါတ်သက်လုို့ ဂရုတစိုက် ဝက်ဘ်ဆုိုက်ကို ထိမ်းသိမ်း သင့်ပါကြောင်း တုိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်.. ဒါနဲ့ ပါတ်သက်လို့ comment မှာ အမှားလာပြင်ပေးသွားတဲ့ Aye Thida Myint ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကြားဖြတ်ပြောလိုပါတယ်။.. J
အုိုကေ…..ဆုိုတော့ ဆက်ပြောရရင်.. အေပရယ် ၁၁ နေ့မှာ pre-qualification အတွက် အဆင့် မှီတဲ့ company ၁၁ ခု စာရင်းကို ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီက ကြေငြာပါတယ်။.. အဲ့ဒါတွေကတော့ အောက်က ပြထားတဲ့ စာရင်း အတုိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
▪ Axiata Group (မလေးရှား)
▪ Bharti Airtel (india)
▪ China Mobile and Vodafone Group (တရုတ် နဲ့ အင်းဂလိပ်)
▪ Digicel Group (ဒါကတော့ မြန်မာနုိုင်ငံမှာ လူသိများပီးသားထင်ပါတယ်)
▪ France Telecom / Orange (ပြင်သစ်)
▪ KDDI Corp and Sumitomo Corp (ဂျပန်)
▪ Millicom International Cellular (အာဖရိက)
▪ MTN Dubai (ဒူဘုိုင်း)
▪ Ooreedo (aka Qatar Telecom) (ကာတာ)
▪ Singtel, KBZ and M-Tel(စင်ကာပူ)
အဲ့ဒီ company တွေ အနေနဲ့ ..pre-qualified ဖြစ်တဲ့ အတွက် mobile network operator လုပ်ကိုင် ခွင့် အတွက်…tender တင်သွင်းခွင့် ရှိတယ် လုို့ သတ်မှတ်လုိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုိုင်း မှာ china mobile and Vodafone ၂ခုပေါင်းထားတဲ့ group အနေနဲ့ သတ်မှတ် deadline ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ internal policy အရ..ဆက်လက် လုပ်ကိုင် လို့ မဖြစ်နုိုင် ဘူး လို့ ယူဆတဲ့ အတွက် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လျောက်လွာ နဲ့ tender ကို တင်သွင်း ခြင်း မပြု့ပဲ..ထွက်သွားတဲ့ အတွက်.. နောက်ဆုံးမှာ company 11 ခုပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။
ဒီနေရာမှာ တခုကြားဖြတ်ပြောလိုတာက..နုိုင်ငံတကာမှာ ဒီ မုိုဘုိုင်းဖုန်း လုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်တွေကို ဘယ်လိုချပေးနေသလဲဆုိုတာပါပဲ။။ နုိုင်ငံတခုအနေနဲ့ သူ့နုိုင်ငံအတွင်းမှာ မုိုဘုိုင်းဖုန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ချပေးတဲ့ နေရာမှာ အသုံးများတဲ့ နည်း လမ်း ၄ခုက အောက်ပါအတိုင်း ရှိပါတယ်။
၁။ ပထမ ဆုံးလုပ်မယ်လုို့ ပြောတဲ့ အရည်အချင်းရှိသူကို အရင်လုပ်ပုိုင်ခွင့်ပေးခြင်း (First come, First served ) လုို့ ခေါ်ပါတယ်။
၂။ လေလံတင်ခြင်း ( Auction ).. ဒီနေရာမှာ ဘာကို လေလံတင်သလဲဆုိုတော့ mobile phone အတွက် လုိုအပ်တဲ့Radio Frequency Bandwidth ကို အသုံးချခွင့်ကို လေလံတင်တာပါ။ ဒီလိုလေလံတင်ပီး လုပ်ပုိုင်ခွင့်ပေးတာဟာ သက်ဆုိုင်ရာနုိုင်ငံရဲ့ အစိုးရအတွက် စစချင်း မှာ ပဲ သပိတ်ဝင် အိတ်ဝင် ငွေလုံးငွေရင်း လုံးကနဲ့ ခဲ ကနဲ့ ရစေတဲ့အကြောင်းတရပ်ပါ..ဒါကြောင့် နုိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ဒီနည်းလမ်းကို သုံးပါတယ်။ ဒီလို Radio Frequency Bandwidth ကို ရောင်းတာကို Natural Resources ကို ရောင်းတာလို့ wireless နည်းပညာ ပညာရှင်တွေက သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆုိုရင်..ဒီ radio frequency bandwidth တွေဟာ လူက ဖန်တီးလို့ ရတဲ့ လှုိုင်းတွေ မဟုတ်ပါ..သူ့ဘာသာ လောက ကြီး မှာ သဘာဝအတိုင်း အလိုအလျောက်ရှိနေတာပါ။ ဒီ radio frequency bandwidth အသုံးချခွင့်ကို company တခုခုကို (ဥပမာ company A ) ရောင်းပီးပီဆုိုရင်..ဒီ bandwidth ကို နောက် တခြား company ကို ထပ်ရောင်းလို့မရတော့ပါဘူး..company A အနေနဲ့ ဒီ bandwidth ကို မသုံးတော့ဘူးဆုိုပီး အစိုးရကုို ပြန်အပ်မှ သော်လည်ကောင်း…ရောင်းထားတဲ့ သက်တမ်း သတ်မှတ်ချက် စေ့သွားတဲ့ အခါကျမှ သာ လည်ကောင်း အစိုးရအနေနဲ့..နောက်ထပ် တခြား သော company တွေကို ပြန်ရောင်းလုို့ရပါတယ်။။ ဒီနေရာ သိထားရမှာက..နုိုင် ငံတခုအတွက် အဲ့လိုမျိုး မုိုဘုိုင်း ဖုန်း network မှာ သုံးလုို့ရတဲ့ bandwidth ဟာ လိုသလောက် ရတာ မဟုတ်ဘူး ဆုိုတာ သိထားရပါမယ့်..။ Natural resources လုို့ပြောတဲ့ အတုိုင်း အကန့် အသတ်နဲ့ သာ ရှိတဲ့ အတွက်… mobile phone service ပေးချင်တဲ့ company တွေ အနေဲ့.. ဒီိလုို့ radio frequency bandwidth အသုံးချခွင့် ကို မဖြစ်မနေ ဝယ်ဖုို့ လိုပါတယ်။ ဟုတ်ပီ ဒါဆုို အဲ့လို မဝယ်ပဲ နဲ့ သူများ သုံးနေတဲ့ bandwidth ကို ပဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ ယူသုံးပီး လုပ်ရင်မရဘူးလားလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် မရပါဘူး..ဘာလုို့ မရသလဲဆုိုတာကို တော့ နောက် တပိုင်း မှာ ဆက်ကြတာပေါ့..
ဆက်ရန်.. နောက် အပိုင်း Radio Frequency Bandwidth ကို ဘာလုို့ ဝယ်ဖို့လိုအပ် သလဲ ဆုိုတာရယ်…. Mobile phone network operator လုပ်ပိုင်ခွင့် ချပေး သော နည်း လမ်း များ အကြောင်းဆက်ပါ့မယ်။။။ ဆန်းမော်
Part – 4..
Radio Frequency Bandwidth or Natural Resources
အရင် အပို်င်းမှာ ပြောခဲ့တာကို ပြန်ကောက်ပါ့မယ်… radio frequency တခုကို မဝယ်ဘဲ..သူများ သုံးနေတာကို ခပ်တည်တည်နဲ့ သုံး မယ်ဆုိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ ဆုိုတော့..လုိုင်း ပူးတာတွေ ဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ ပေးရမယ် ဆုိုရင်တော့.. ဟိုး အရင် BBC, VOA, RFA နားထောင် တဲ့ လူတွေ မှတ်မီ ဦး မယ် ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက.. BBC, VOA, RFA က လွှင့်တဲ့ အသံတွေကို အင်တာနက် က နေ နားထောင်လို့ မရသေးပါဘူး..လေလှိုင်းထဲကနေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရေဒီယိုလှုိုင်းအတိုင်း လွှင့်တာ ကို ရေဒီယို်လေးတွေနဲ့ ဖမ်းပီး နားထောင်ရတာပါ။ ကျုပ်တုို့ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်မှာ အဲ့လိုမျိုး ရေဒီယို လေးနဲ့ ၈ျစ်၈ျစ် ၈ျစ် ၈ျစ် အသံတွေနဲ့ လူကြီး တွေ သတင်း နားထောင်နေပီဆုို..နားရွက်တောင် မခပ်ရဲဘူး ဗျို့။ မဟုတ်ရင် ကောင်းကောင်း သတင်း နားထောင်လုို့မရဘူး..အာရုံနောက်တယ် ဘာညာ နဲ့ အဆူခံရမှာလေ…. လူကြီးတွေက ကျုပ်တုို့ကလေးတွေသာ ဆူတာဗျ..သတင်း နားထောင် ကောင်းတုန်းဆုို..လာပါပီ ခန နေရင်..အနှောင့် အယှက် …ဘီဘီစီ..RFA လွှင့်တာကို ဖမ်းပီး နားထောင်နေတဲ့ လူတွေ နားထောင် မရအောင် ဆုိုပီး.. အဲ့ဒီ ခေတ်တုန်းက.. အမေရိကန်.. အင်းဂလိပ် နုိုင် ငံတွေနဲ့ ပြိူင်ဘက် ကွန်မြူနစ် နုိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့..ဆုိုဗီယက် ရုရှား နဲ့ တရုတ် နုိုင် ငံတွေက..နေ..BBC ..RFA ..VOA အသံလွှင့်ရုံတွေက လွှင့်တဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်း အတုိုင်း ခေါင်း လောင်း ထုိုးသံ..တုို့ မောင်း ထု့သံတုိုက..လွှင့်ပါတော့တယ်… RFA အစရှိသည်က လွှင့်တဲ့ အသံနဲ့..ထပ်တူကျတဲ့ လှိုင်းကုို သုံးပီး ခေါင်း လောင်းထိုးသံ မောင်း ထုသံတွေကို လွှင့် တဲ့ အတွက်.အသံ၂ခု ရောသွားပီး သတင်း ကို ကောင်းကောင်း နားထောင်လို့ မရေတော့ပါဘူး.. BBC တုို့..RFA တုို့က လဲ သိတယ် ဗျ..အဲ့လို အလုပ်ခံနေရတယ်ဆုိုတာကို..အဲ့ဒီတော့ သူတုို့က လဲ ဘာပြန်လုပ်လဲ ဆုိုတော့ သူတုို့ အသံလွှင့်တဲ့ ရေဒီယုို လှိုင်းကို နဲနဲ ..နဲနဲ ခြင်းစီ..ပြောင်းပြောင်း ပီး လွှင့်တယ်..ဆုိုလုိုချင် တာက..အသံလွှင့်တဲ့ လှိုင်းကို အသေတခုထဲ သုံးပီး မလွှင့်ပဲ..နဲနဲ စီ ပြောင်းပီး လွှင့်တော့..ခု န အနှောက်အယှက် ပေးတဲ့ ခေါင်းလောင်းထိုးသံကို ရှောင်ပီးသားဖြစ်သွားတာပေ့ါဗျာ…ဒါပေမယ့် နားထောင်တဲ့ လူကလဲ ဒီအတိုင်း ထိုင် ပီး နားထောင်နေလို့ မရဘူးဗျ..ရေဒီယို ဖမ်း တဲ့ ..ဘု့ လေးကို..နဲနဲခြင်းစီ လှည့်လှည့်ပီး BBC ..တို့..RFA တုို့ ပြောင်းသွားတဲ့ လှိုင်းနဲ့ ကိုက်အောင် ပြန်ပြန်ချိန်ပေးရတယ်.. အဲ့လုိုမှ..သတင်း ကြေညာ တဲ့ အသံကို ကောင်းကောင်းဆက်ပီး နားထောင်လို့ရတယ်…မဟုတ်ရင်..အသံက..တဖြည်းဖြည်းအားနည်းပီး တုိုးသွားပျောက်သွားတတ်တယ်။..ထားပါတော့ ဒါကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် တော်တော်ကြာ က အဖြစ်အပျက်ပေါ့.. အဲ့ဒါကို ပြန်ပြောင်းပြော ပြတာက.. ရေဒီယို အသံလှိုင်း ၁ ခုကို ၁ယောက် က သုံးနေပီဆုိုရင်.နောက် တယောက် က ထပ်သုံးလို့မရတော့ဘူးဆုို တာကို ရှင်းအောင် ဥပမာပေးပီး ပြောပြတာ..ခပ်တည်တည်နဲ့ ယူသုံးရင် ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ၂ ယောက် လုံး အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး ..သုံးမရေတော့ဘူးပေ့ါ.. ဒီလုိုမျိုးပဲ..မုိုဘုိုင်း ဖုန်းတွေ အတွက် လဲ..စကားပြောဖုို့ ဆက်သွယ်ဖုို့အတွက်.radio frequency bandwidth တွေကို..operator တခု ဆီအတွှက် သီးသန့် သတ်မှတ်ပေးရတယ်…အဲ့လိုမျိုး Bandwidth တခု မှာ ဆုိုရင် mobile phone user ပေါင်း ရာထောင် ချီပီး သုံးလို့ရနုိုင် တယ်ပေ့ါ…
ဆုိုတော့ ဒီ radio frequency bandwidth ကို mobile phone operator A ကို ရောင်းပီး ပီ ဆုိုရင် တခြား mobile phone operator ကို ထပ်ရောင်းလုို့မရတော့ပါဘူး..နောက်တခြား mobile phone operator အတွက်က နောက် ထပ် တခြား ကျန်နေသေးတဲ့ ရောင်းလို့ရတဲ့ bandwidth ကိုပဲ ရောင်း လို့ရပါမယ့်။ ဒါကြောင့် ဒီလုို့ အကန့်အသတ်နဲ့ သာရောင်းလုို့ရတဲ့ အတွက်..ဒီ radio frequency bandwidth ကို လေလံတင်ပီး ရောင်းတယ် ဆုိုရင်.. mobile phone network operator အလုပ် ကို လုပ်ချင် တဲ့ company တွေက အပြိုင်အဆုိုင် ဈေး ပေးပိး ဝယ်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်..သက်ဆုိုင် ရာ နုိုင်ငံ ရဲ့ အစိုးရအနေနဲ့..တွက် ခြေပိုကိုက်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရမယ် ဆုိုရင် ၂၀၁၀ တုန်းက..india အစိုးရက..အဲ့ဒီလို မျိုး လေလံတင်ရောင်းတာကနေ..radio frequency bandwidth အတွက် US$ ပေါင်း 12 billion (ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၁သောင်း၂ထောင် ) ထိ အသားတင်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို အောက် က လင့် မှာ သွားရောက်ဖတ်ရှု့နုိုင်ပါတယ်။ http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Telecom_Spectrum_Auction
ဒါပေမယ့် လေလံတင်ခြင်းရဲ့ မကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့… အစိုးရအတွက် အသားတင် ဝင်ငွေ ကောင်းကောင်းရပေမယ့်.. ဖုန်းသုံးမယ့် ပြည်သူလူထူအတွက်တော့ ဖုန်းပြောခ တွေ ဈေးကြီး ကုန်တာ တော့တာပါပဲ။။( မြင်အောင် ပြောရရင်..ဈေး ထဲမှာ အသားသတ် လိုင် စင် ဈေး ကြီး ပေးထားရရင်..အသားရောင်းတဲ့ လူ က..ရောင်းတဲ့ အသားပေါ်မှာ..လုိုင် စစ်ခ ကြေအောင်..အမြတ်ရအောင်..ဈေးဝယ်ပေါ် တင်လုိုက်သလုိုပေါ့။ ) ဒါကြောင့် ဒီလို လေလံတင်ခြင်းကို လုပ်တာဟာ အစိုး ရအတွက် ဝင်ငွေတုိုးစေ ပေမယ့် သာမာန်အများပြည်သူလူထု့အတွက် တော့…ဖုန်းပြောခ ဈေူးကြိးပီး..ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေပါတယ်။။ အဲ့လို ဖုန်းပြောခ ဈေး ကြီး တာမျိုး ကို လဲ မဖြစ်စေချင်ဘူးဆုိုရင်တော့..အစိုးရအနေနဲ့..mobile network operator တွေကို လုပ်ပိုင် ခွင့် ချပေးဖုို့အတွက် နောက် ထပ် နည်း လမ်း ၂ ခု ကျန်ပါသေးတယ်။။။
နံပါတ် ၃ နည်း လမ်း က..beauty contest နည်း လမ်း နဲ့
နံပါတ် ၄..နည်းလမ်း .. direct assignment with or withoutafixed price ဆုိုတဲ့ နည်း လမ်း ၂ ခုပါ.. အဲ့ဒီ ၂ ခု ကိုတော့ နောက် တပိုင်း ကျမှ ဆက်ကြတာပေ့ါ..
Part – 5.. beauty contest and direct assignment methods
ဒီအပိုင်း မှာ ပထမ ဆုံး beauty contest နဲ့ မုိုဘုိုင်းဖုန်း လုပ်ပိုင် ခွင့်ချပေးတာကို ဆက်ကြရအောင်.. မြန်မာ အစိုးရ သုံးသွားတာ ခု ပြောတဲ့ နံပါတ် ၃ နည်း လမ်း ကို သုံးပီး.. mobile phone operator company ကို ရွေးသွားတာပါ..
ဒီနည်း မှာ အစိုးရက..မုိုဘိုင်းဖုန်းလုပ်ငန်း လုပ်မည့် သူတွေဆီက နေ သူတုိုင်း ပြည် အတွက် ပြည်သူလူထု့အတွက် ဘာတွေ ကို ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆုိုတဲံ အစီအ စဉ် အစ ရှိတာတွေကိုအသေးစိတ် plan ရေးဆွဲပီး tender တင်တဲ့ အချိန်မှာ.. အိတ်ပိတ်၊ ချိတ်ပိတ်ပီး..tender တင်ခို်င်းပါတယ်။ အဲ့လို တင် တဲ့ company တွေရဲ့ plan ပေါ်မူတည်ပီး.. တုိုင်းပြည် အတွက် အများပြည်သူအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးနုိုင်မယ် လုို့ ယူဆတဲ့ company ကို လုပ်ပိုင် ခွင့် ချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်… ဒီလို နည်း လမ်း မှာ radio frequency bandwidth ကို လေ လံတင် ရောင်းသလိုမျိုး ပိုက်ဆံ အများ ဆုံး ပေးနိုင် တုိုင်းလဲ.ရမယ် လို့ ပြောလို့ မရပါဘူး.. လှယဉ်ကျေးမယ် များ ရွေးသလိုပေ့ါ….လှုတုိုင်း လဲ မနိုင် သေးပါဘူး..ဗဟုသုတ လဲ ပြည့်စုံ မှ.. ယဉ်လဲ ယဉ်ကျေးမှ.. သွက်လက် ချက်ချာ မှ..ပထမ ဆုကို ရနုိုင် မယ် ဆုိုတဲ့ သဘောပေ့ါ..ဒါကြောင့် နည်းလမ်း နံမည် ကို က.. beauty contest ( အလှမယ် ရွေးပွဲ ) လုို့ အကြမ်း အားဖြင့် ဘာသာပြန်လုို့ရတာပေ့ါ ဗျာ။
ဆုိုတော့ ဒီလုိုရွေးပွဲ မှာအကဲဖြတ်ဒိုင်တွေက ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် သူတွေ အနေနဲ့..ဘယ်အချက် တွေ အတွက် ကို အမှတ် ဘယ်လောက် သတ်မှတ်ထားတယ် ဆုိုတဲ့..အမှတ်ပေး စည်းမျည်း တွေ ရှိကြောင်း နဲ့ လည်းကောင်း အမှတ်ပေးစည်းမျည်း များကို အများ သိအောင်ကြေညာ ထားပေးရပါတယ်။ ဒီနေရာ မှာ တခု ဖြတ်ပြောစရာရှိတာက.. အစိုးရ ဟာ .လေလံတင် ပီး ရွေးတဲ့..နံပါတ် ၂ နည်းလမ်း ကို မသုံးပဲ.. ခု ပြောနေတဲ့ နံပါတ် ၃ နည်း လမ်း ကို သုံး ပီး mobile phone network operator ကို ရွေး တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အစိုး ရအနေနဲ့..ကတော့ ပိုက် ဆံများများ ရတာ တခု တည်း ကို ပဲ ကြည့်တာ မဟုတ်တော့ဘူး ဆုိုတာ တော့ သေချာပေါက် ပြောနုိုင်ပါတယ်။ ပိုက် ဆံ များများ ရဖုို့ တခု သာ ကြည့်မယ် ဆုိုရင်တော့ လေလံတင် ပီး ရွေးတာက ပို ရနုိုင်ပေမယ့် ခု ဟာ ကကျတော့.. beauty contest နည်း လမ်း ကို သုံးတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒိနေရာမှာ..တော့ အများ ပြည်သူကို..ပိုပီး ဥိးစားပေးစဉ်းစားတယ် ဆုိုတာ ယေဘူယျအားဖြင့် ပြောနုိုင်ပါတယ်။ ဒါဆုို မေး စရာ တခု ပေါ်လာတာ က… ဟုတ်ပီ..ခု နံပါတ် ၃ နည်း လမ်း က..ရည်ရွယ်ချက် အားဖြင့်တော့ ကောင်းပါတယ်..ဒါပေမယ့် အကဲဖြတ်ဒုိုင် လူကြီးတွေ..က..ပထမ..ဒုတိယ ရွေးတာဆုိုတော့..ဒီ ဒိုင် တွေ လာဘ်မစားပဲ ရွေး တယ် ဆိုတာ ဖြစ်နုိုင်ပါ့မလားပေ့ါ.. မြန်မာနုိုင်ငံ ဆုိုတာ က သိတဲ့အတိုင်းပဲ မဟုတ်လား..လာဘ်ပေး .လာဘ်ယူ သောင်းကျန်းတဲ့ နေရာမှာ..အလွန်နာမည် ကြီးတယ် ဆုိုတော့ကာ.. တကယ် လို့သာ..ဒီလို လာဘ်ယူပီး..လုပ်ပိုင်ခွင့် ချပေးလိုက်တယ် ဆုိုရင်..မိအေး ၂ခါ နာ ဖြစ်တော့ မပေ့ါ….အစိုးရလဲ ပိုက်ဆံမရ..ပြည်သူလူထုလဲ နစ်နာ..ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား.. ..ဒါဆိုရင်တော့ အစိုးရ အခွန်များများ ရနုိုင်တဲ့..လေလံတင်ရောင်းခြင်း ကသာ ပို ပီး ကောင်းတော့ မပေ့ါ လုို့ ပြောစရာဖြစ်လာပါတယ်။ မှန်ပါတယ်..ဒီ beauty contest နည်း လမ်း ကို သုံးမယ် ဆုိုရင်..အကဲ ဖြတ် ဒိုင် တွေ လာဘ် ယူပီး လုပ်ပုိုင် ခွင့် ချပေး တာမျိုး မဖြစ် အောင်..control လုပ်ထားနုိုင် ဖုို့လုိုပါတယ်။။ ဟုတ်ပီ ဒါဆုို ဒီလုို control မျိုး ကို ဘယ် လို လုပ်မလဲ.. ဘယ်လိုထိန်းမလဲ.. ဆုိုတာ က အရေးကြီးလာပါပီ..
အဲ့ဒါကို ဘယ်လိုဖြေရှင်း သွားသလဲ ဆုိုတာကိုတော့ နောက်တပိုင်း မှ ဆက်ကြတာပေ့ါ..
Posted by Admin at Sunday, June 30, 20130comments